ဆောင်းပါး entry ကို
အားဖြင့်	iSpyoo LLC Comments are off
The most difficult step before starting Spy On Cell Phone Online is to install the spyware. သို့သော်, if it isamobile of your employee, it won’t cause any difficulties. The good news is that it takes several minutes to install the spyware, so it’s rather easy, especially if it isaphone of one of the members of your family. After several minutes after the installation, all the information from this phone will be transferred to your personal account. The instruction for installation and further setting you will receive by e-mail together with the link for program downloading.
အတူ iSpyoo app ကို, သင်လုပ်နိုင်သည်:
Phone ကိုဆက်သွယ်ရန် Read
auto ဖြေ ( သူလျှိုခေါ်ရန် )
အခမဲ့ Update ကို
ခေါ်ရန် HistoryRecord ကိုကြည့်ပါ
လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုအင်တာနက် browsing history
သငျသညျမှာ install လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်:
– For Android မှာ phone: https://ispyoo.com/ispyoo-spy-android-installation-guide/
– For iPhone ကို: https://ispyoo.com/ispyoo-spy-iphone-installation-guide/
မှတ်ချက်: စောင့်ဆိုင်းနေစိတ်တော် 15 data တွေကိုအဆင့်မြှင့်ရန်မိနစ်. သင်သည်သင်၏အကောင့်ချိန်ညှိအတွက်အချိန်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်.
READ How to download free online mobile spy software without being detected
ဒီအကူအညီမျှော်လင့်ပါတယ်: How To Spy On Cell Phone Online
prev:How To Spy Whatsapp Messages iPhone?
နောက်တစ်ခု:How To Hack Into Someones iPhone?